Amin'ny teny arabo amin'ny fomba amam-panao sy Fomban-drazana Arabo Akademia - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Amin'ny teny arabo amin'ny fomba amam-panao sy Fomban-drazana Arabo Akademia
Ny fomba amam-panao sy ny fomba amam-panao ny kolontsaina Arabo manana fahasamihafana maro raha oharina amin'ny kolontsaina TandrefanaRaha toa ianao ka mandeha any amin'ny firenena Arabo, ny fahafantarana ny sasany Arabo amin'ny fomba amam-panao sy fomban-drazana dia hahatonga ny fitsidihana mahafinaritra kokoa. Na raha toa ka tsy mieritreritra ny diany, mahafinaritra ihany koa ny fahazoana manam-pahaizana momba ny kolontsaina hafa. Na ianao fianarana any ivelany, ny fitsidihana na dia mikasa ny raharaha nankany ny teny arabo ny firenena, na fotsiny te-hianatra bebe kokoa momba ny kolontsaina, ireto ambany ireto ny sasantsasany manan-danja sy mahaliana ny teny arabo amin'ny fomba amam-panao sy fomban-drazana: kolontsaina Arabo sy ny Silamo ny finoana dia mifamatotra lalina.
Raha ny finoana Silamo no tena manjaka ny fivavahana hafa ny vondrona ara-pivavahana dia ekena sy raisina am-panajana.
Indrindra ny Arabo dia mino fa ny ankamaroan ny fiainana ny zava-nitranga dia voafehy sy amin'ny alalan'ny fikatsahana An'andriamanitra. Lehilahy iray miankin-doha amin'ny ny lahatra araka ny voafaritry ny Andriamanitra, ary tsy manan-kery amin'ny fifehezana maro eo amin'ny fiainana ny zava-nitranga.
Vokatr'izany, ny firehana ara-pinoana dia zava-dehibe ho an'ny olona rehetra ao amin'ny fiarahamonina Arabo.
Indrindra Arabo mino fa tsy tokony hisy fisarahana eo amin'ny fiangonana sy ny fanjakana ary ny fivavahana dia tokony ho ampianarina ny ankizy any an-tsekoly. Raha misy antokom-pivavahana maro ny finoana Silamo, ny lalàna Islamika (Sharia) dia zava-dehibe toy ny hafa karazana lalàna. Fiangonana silamo dia raisina ho toerana masina sy fitsipika henjana hiaraka hitsidika ny maoske. Ny sasany izany dia ahitana ny tsy nandeha teo anoloan'ny olona ny fivavahana, ny fandrarana ny sary na lahatsary ny olona amin'ny moske, ary ny fandraràna ny olona manao short sy ny vehivavy manao tanany na fohy nahitana-sleeved akanjo. Fianakaviana tsy fivadihana sy ny adidy handray tiana mihoatra noho ny tsy fivadihana sy ny adidy mba namana na ny asa sy ny mihoatra ny iray ny zavatra ilaina manokana. Ny ankizy dia raisina ho toy"ny firavaka"ary ny lehilahy sy ny vehivavy, ary koa ny lehilahy sy ny vehivavy, ny ankizy manana samy hafa sy miavaka tsara ny andraikitra.
Ny fianakaviana rafitra dia mafy-raiki-pitia, ary dia iray amin'ireo lehibe ny famaritana ny anton-javatra manokana ny sata, arahin'ny olona ny toetra sy ny zava-bita. Ny olona iray ny voninahitra sy ny fahamendrehana avy amin'ny fianakaviany Rehefa nitsidika ny firenena arabo, manampy ny mahafantatra ny fomba amam-panao, ny fomba amam-panao sy ny fiteny.
Arabo Akademia afaka manampy anao hianatra teny arabo mba hahatonga ny fifandraisana amin'ny Arabo manan-danja kokoa sy mahafinaritra.
Lisitry ny firenena amin'ny vahoaka trosa